AL Shabaab oo soo bandhigay gawaari iyo hub ay ka qabsadeen Dowlada Soomaaliya - Muqdisho Online
Home Wararka AL Shabaab oo soo bandhigay gawaari iyo hub ay ka qabsadeen Dowlada...
AL Shabaab oo soo bandhigay gawaari iyo hub ay ka qabsadeen Dowlada Soomaaliya
Ururka Alshabaab ayaa waxa ay bishii u danbeeysay weeraro ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaalo koonfurta Soomalaya. Waxaana ay ku guuleysteen in si kadis ah u dilaan saraakiil ka tirsan Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya. AL Shabaab soo bandhigayayaa gaari nooca dagaalka ah oo sheegeen in ay ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka.
Gaaridaan ay soo bandhigeen Alshabaab ayaa ah nooca loo yaqaan Tiknikada, waxaana ay ku sheegteen in ay kusoo qabsadeen dagaal iyaga iyo ciidamada Dowlada ku dhexmaray duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida ay ku baahiyeen baraha ay ku faafiyaan wararka.
Previous articleCiidamada Itoobiya oo dhibaatooyin xoogan u geeystay Shacab ku nool Buur-hakabo
Next articleNew report on Islamic State details presence across Africa